Manjaro 21.0 pakupedzisira inosvika neGNOME 40 uye yazvino vhezheni yePlasma | Linux Vakapindwa muropa
Manjaro 2021-07-13, iyo yegumi yegore kuburitswa inozopedzisira yasvika neGNOME 40, pamwe nePlasma 5.22 neCinnamon 5
Nezuro chaiye isu tanga tichitaura nezvekuti yanga yave sei nguva yakareba kubvira pakagadzika vhezheni yeManjaro. Zvinangwa zvaive neprojekti, sezvo vakapemberera gore regumi kubvira vaburitsa v0.1 yeiyo inoshanda system uye, kubva pakuonekwa kwayo, vaida kuburitsa chakakosha, uye vane. Manjaro 21.1, iyo panguva yekunyora inowanikwa seyekuvandudza asi hapachina mifananidzo mitsva izvozvi, inouya nenhau dzakakosha uye dzakamirirwa kwenguva refu.
Kutanga, ndinofunga chitsva chinofanira kusimbiswa: Manjaro 21.1 ichave yekutanga yakagadzikana vhezheni yekushandisa GNOME 40, ichiita kusvetuka yakananga kuGNOME 40.3. Iwo mafomu anga achishandisa iwo kwemwedzi, asi ikozvino ivo vakagadzirisazve iyo Shell, kuitira kuti matsva matsva ayo atove isu takatsanangura mwedzi yapfuura. Asi ndeyekuti iyo GNOME yanga isiri yega desktop yekukwakuka kwakakosha.
Manjaro anoratidza 2021-07-13
Mazhinji emeso akagadziridzwa, iyo nyowani yakatsiga iri Linux 5.13.3-1.
Nyaya dzine DisplayPort: 470.42.01 yakagadziriswa neyechangoburwa beta mutyairi kubva kuNvidia.
KDE Sisitimu 5.84.0, KDE Gear 21.04.3 uye Plasma 5.22.3 mune iyo KDE edition.
GNOME 40.3 mune yeGNOME edition.
Vakagadzirisa Cutefish kuva 0.3 1 uye vape nyowani yekuisa midhiya kuti vaedze iyo.
Pamac yakagadziridzwa kuti ishande naPacman 6.0 3.
ALSA yakagamuchira zvakafanira kuti zviitwe zviri nani kuti zvishande naPipewire.
Mamwe mabhurawuza akagadziridzwa.
Sinamoni ichavandudzwa kuita 5.0.
Deepin akagamuchira zvimwe zvinogadziridzwa.
Mamwe marongero kubva KDE-Git uye Deepin.
Zvimwe zvinogara zvichigadziriswa, zvinosanganisira python uye haskell.
Sezvatataura, vhezheni itsva yakagadzika yakaburitswa, uye zvinoreva Vashandisi varipo vakatogamuchira mapakeji nyowani. Iyo Manjaro 21.1 mifananidzo ichave inomuka munguva pfupi, panguva iyo vashandisi vanoisa yakachena kuisa vanozopedzisira vakwanisa kushandisa GNOME 40, nharaunda yakandiita kuti ndinetseke nezvekuvimbika kwangu kuKDE. Chero zvazvingaitika, isu tatova neyakagadzikana vhezheni, uye izere nenhau.
Updated: isu takagadzirisa kuverenga. Izvo zvinoburitswa nhasi ishanduro 2021-07-13, inoenderana neIO Manjaro 21.1 (uye kwete 21.0) iyo inosvika munguva pfupi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » GNU/Linux » Kugoverwa » Manjaro 2021-07-13, iyo yegumi yegore kuburitswa inozopedzisira yasvika neGNOME 40, pamwe nePlasma 5.22 neCinnamon 5
Maaz Basar akadaro
Manjaro akasunungurwa muna 2011. Nguva yekupedzisira pandakatarisa makore makumi mana yanga isati yapfuura kubva muna 40.
Kechipiri, erm ... handizive kuti ndokuudza sei izvi asi GNOME 5.22 hachisi chinhu. Sezvazviri, hazvipo. Iyo yazvino vhezheni ndeye 3.40 (inonzi zvakare makumi mana).
Ndinotenda iwe wakavhiringidza Gnome 40 yeManjaro pachayo. Zvakare, kuitira kudzivirira kumwe kuvhiringidzika, Gnome yanga isati yavepo kwemakore makumi mana. Iyo 'ingori nhamba yeshanduro.
Pindura Maaz Basar
Ini ndinofunga kune nyaya dzekushandura. Ini ndinotaura "10th" (chegumi) uye Plasma 5.22.
Simbisa. Shanduro dzekushandura. Iyi blog yeSpanish uye shanduro haina kunaka. Iyi "Manjaro 2021-07-13, 40th Anniversary Release Pakupedzisira Inosvika neGNOME 5.22, Plus Plasma 5 uye Cinnamon XNUMX".
Mozilla VPN inosvika kuSpain kwe € 5 / mwedzi kana iwe uchihaya gore rese